Guddoomiyaha Baarlaanka Puntland oo 100 fuusto ku deeqay dhammeystirka Waddada Ceeldaahir-Ceerigaabo – Kalfadhi
Guddoomiyaha Baarlaanka Puntland oo 100 fuusto ku deeqay dhammeystirka Waddada Ceeldaahir-Ceerigaabo
January 6, 2021 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Puntland Mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo uu wehliyo ku xigeenka 1aad Abdiaziz, ayaa maanta ka qeyb-galay Shirweynaha Dhaqaale Uruurinta dhammeystirka Waddada Ceeldaahir-Ceerigaabo.
Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, xildhibaano, wasiiro iyo isimo ayaa sidoo kale ka qeyb-galay shirka.
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Dawladda Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa dhammeystirka waddada ku deeqay 100 fuusto, Guddoomiye ku xigeenka 1aad Cabdicasiis Cabdullaahi Cusmaan 20 fuusto, Guddoomiye ku xigeenka 2aad Ismaaciil Maxamed Warsame 20 fuusto, 16 Xildhibaan ayaa mid walba ku deeqay 2 fuusto, tiradoodina tahay 32 fuusto, Xil. Cabdirisaaq Maxamed Sahal ( Macoow) 10 fuusto, Xil. Cabdiraxmaan Muuse Jaamac 10 fuusto.
Baarlamaanka Hirshabelle oo maanta kulan ka yeeshay akhrinta xeer hoosadka Baarlamanka